14 ciyaaryahan oo Barcelona uga qeyb galaya ciyaaraha caalamiga ah & Xiddigaha ka tirsan Kooxda oo wacdaraha dhigay ee xulalkooda goolal u dhaliyey – Gool FM
14 ciyaaryahan oo Barcelona uga qeyb galaya ciyaaraha caalamiga ah & Xiddigaha ka tirsan Kooxda oo wacdaraha dhigay ee xulalkooda goolal u dhaliyey
Haaruun March 27, 2021
(Barcelona) 27 Maarso 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona 14 ciyaaryahan ayaa uga qeyb galaya ciyaaraha caalamiga ah, ilaa iyo haatanna waxaa jira xiddigo wacdaro dhigaya oo goolal u dhaliyey xulalkooda, kuwaasoo ka tirsan naadiga reer Spain.
Waxaan warbixintaan ku eegeynaa xiddigaha wacdaraha dhigaya ee qarankooda goolasha u dhaliyey illaa iyo haatan inta lagu guda jiro fasaxa caalamiga ah, isla markaana ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona.
Sergino Dest ayaa xulkiisa loo xushay, waxaana uu qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay qarankiisa Mareykanka.
Dest waxa uu labo gool ka dhaliyey Real Sociedad, waxaana bandhiggiisa uu sii waday ciyaartii ay ka hortageen Jamaica, kulankaas oo uu ay uga adkaadeen 4-1 ayuu gool hore u dhaliyey xulkiisa, waxaana uu ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiicnaa kulanka.
Antoine Griezmann, Martin Braithwaite iyo Miralem Pjanic ayaa dhammaantood iyaguna shabaqa soo taabtay, isagoo weeraryahan Griezmann uu gool qurux badan u dhaliyey xulkiisa France kaddib dadaal cajiib ah oo uu ku bixiyey lugtiisa bidix.
Waxa uu Griezmann sidaas ku barbareeyey goolashii uu xulka Les Bleus u dhaliyey David Trezeguet oo ahaa 34 gool, waxaana weeraryahanka Barcelona uu sidaas ku noqday ciyaaryahanka afaraad ee ugu goolasha badan qaranka Faransiiska.
Braithwaite ayaa hal gool dhaliyey una daah furay goolasha xulkiisa Denmark kulankii ay 2-0 uga adkaadeen Israel, halka Pjanic uu si xariifnimo ah uga soo kabsaday rigoore uu khasaariyey, isla markaana dhaliyey kulankii xulkiisa Bosnia and Herzegovina uu 2-2 la galay Finland.
Macallin Solskjaer oo xitaa haddii uu saxiixo heshiiska cusub ee uu lacagaha badan ku helayo weli ka mushahar yar Tababare Carlo Ancelotti
Xiddig ka tirsan Manchester United oo lagu wargaliyay inuu isaga tago garoonka Old Trafford